Samsung dia hamerina hamorona ny elanelana Galaxy S amin'ny taona ho avy | Androidsis
Samsung hamerina hamorona ny elanelana Galaxy S amin'ny taona ho avy
Nandritra ny 10 taona, andro vitsivitsy lasa izay nankalazaina ny faha-XNUMX taonan'ny famoahana ny laharana Samsung S eny an-tsena, ny orinasa Koreana dia nampiasa ity taratasy ity mba hanasokajiana ny tsirairay amin'ireo terminal can-range izay natombony teny an-tsena. Saingy toa hiova izy io.
Samsung dia mety hamarana ny marika famantarana ny Galaxy S atsy ho atsy. Araka ny tsaho isan-karazany, ny orinasa dia hisaintsaina ny fampiasana nomenclature vaovao ho an'ny finday avoakan'ny ho avy, ka ny Galaxy S10 farany teo dia mety ho fitaovana farany nampiasa ny teti-dratsy ankehitriny.
Samsung dia mampiasa ny anarana alphanumeric hatramin'ny nanombohany ny Galaxy S voalohany tamin'ny 2009, araka ny nolazaiko tao amin'ny andalana teo aloha. Saingy toa ny elanelana Galaxy S tsy io irery no mahazo fanovana nomenclature, fa ny Galaxy Note dia ho tafiditra ao koa. Taorian'ny fampisehoana ny Galaxy S9, DJ Koh, lehiben'ny fizarana finday an'ny Samsung, dia nilaza fa misokatra ny orinasa hanova ny anaran'ny karazana fitaovany.
Samsung mino an'izany mety ho sarotra amin'ny olona ny manonona telefaona manomboka amin'ny 11, 12, 13... "Fantatr'i Samsung fa aorian'ny S10, mety tsy tian'ny olona ny anarana lava kokoa izay ho tonga miaraka amin'ny tarehimarika roa, raha mijanona amin'ny rafitra misy antsika isika ankehitriny," hoy ny masoivohom-baovao Yonhap mitanisa teny avy amin'ny mpitantana orinasa iray.
Amin'izay mba tsy ny Galaxy S ihany no ho voakasiky ny fanovana anarana, fa hisy akony ihany koa ny elanelan'ny Note, izay hanombohana amin'ity taona ity ny Note 10, angamba ny maodely farany hampiasana ity nomenclature ity.
fa Tsy Samsung irery no mpanamboatra hieritreritra an'ity fanovana ity. Apple dia nanangana ny iPhone X (10) roa taona lasa izay, nandefa ilay fanavaozana kely antsoina hoe XS tamin'ny taon-dasa, noho izany dia azo inoana fa amin'ity taona ity, dia voatery hanova ny anaran'ny tandavan-tsariny ihany koa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Samsung hamerina hamorona ny elanelana Galaxy S amin'ny taona ho avy
ZTE Axon 10 Pro: telefaona voalohany an'ny marika misy 5G
Alcatel dia manolotra ireo findainy vaovao ao amin'ny MWC 2019